Iindaba | Ucanzibe 2022
Iinkampani ezisi-7 eziQesha abasebenzi abakude ngeeholide ngoku
Ukusuka eAmazon ukuya eWilliam-Sonoma, jonga iinkampani ezimbalwa eziqesha abasebenzi abakude ngexesha leholide.
USherwin-Williams Kule Mibala Palettes iyakusisa ku-2020 nangaphaya kwayo
KungoAgasti, kodwa ungabheja u-2020 uya kuba lapha ungekayazi. Kwiminyaka elishumi ezayo kuza imibala emitsha yonyaka, kwaye ngokukhangeleka kwayo, siza kuba siqala ngonyawo oluhle kakhulu. Iinkampani zeepeyinti zihlala zikhupha uqikelelo lombala ngaphambi kokuba zikhethe ngokusesikweni uMbala woNyaka- zihlala zineCOTY entsha efihliweyo kwindawo ebonakalayo phakathi kweephalethi zayo.
Iithayile zokuhambisa eziphathwayo, iiKettlebells, kunye nokuQiniseka ngokuLula kweStash Fitness kwiiNdawo ezincinci (kunye neWFH!)
Siqokelele izixhobo zethu esizithandayo ekhaya onokuzisebenzisa nakwezona zincinci izithuba, ukusuka ngaphantsi kwedesika yedesika ukuya kwi kettlebells.
Izinto ezili-10 eziBalaseleyo zokuThenga kwiBhedi yokuhlambela kunye nokuThengisa ukuThengiswa kwe-Epic clearance (Molo, Dyson!)
Ibhedi yokuhlambela kunye nangaphaya kweNtengiso yokuSuswa kukaMatshi igcinwe ngeentengiso ezimangalisayo kwizinto eziphezulu zasekhaya ezivela eKeurig, eDyson, kunye nezinye iimveliso ezaziwayo.
Isilumkiso: IBhotile yoBumba ineNdawo yokuThengisa yeGumbi lokuPhila-kubandakanya iipesenti ezingama-20 kuzo zonke iiSofa
Igumbi lokuhlala lePottery Barn lijongana neesofa, iitafile zekofu, kunye nokuhombisa ixesha elincinci.
Amaqabane e-West Elm ane-Steelcase kuyo yonke into oyifunayo ukuze uhlaziye ukuseta kwakho kwe-WFH
I-West Elm ibhengeze uthotho lweengqokelela ezikhethiweyo ezibizwa ngokuba nguMsebenzi-ezenziwe ngokubambisana ne-Steelcase-ezibonelela ngendawo encinci, iiofisi zasekhaya eziyimfuneko ezidibanisa ubuhle nezinto eziluncedo. Ukukhethwa kweemveliso ezingama-26 kubandakanya izitulo zeofisi ze-ergonomic, iidesika, ukugcinwa, izitendi zelaptop, kunye nokunye.
I-Costco's Intengiso yangoLwesihlanu oMnyama iVuziwe, kwaye kukho iidilesi kwiidysons, iidayimani, izixhobo kunye nokunye
Asikaze sizalise iilekese zeHalloween okwangoku, kwaye sele sibona izivumelwano zoLwesihlanu oMnyama. Intengiso yecostco evuzayo inamaphepha angama-32 okuthengisa, amanye awo aqala kwangoko nge-7 kaNovemba. Isetyhula inezinto ezininzi ze-elektroniki, ke ukuba ukwiNtengiso yeTV entsha, ilaptop, esweni, umdlalo wevidiyo ikhonsoli, okanye ithebhulethi, kufanelekile ukuba uyijonge. Kukho ukutya okuninzi kunye nezinto zokunxiba eziphawulwe nazo.
Iikiti zeMithi yeKrisimesi ezijolise kuko yeyona ndlela ilula yokuhombisa kulo nyaka
Jonga uluhlu lweetekethi zokuhombisa imithi, ukusuka kwisitayile sendlu yasekhaya yasefama ukuya kumxholo wobusika obumhlophe weKrisimesi.
UDyson ngoku uthengisa iiV vacuums ezintathu zoBungakanani boMntwana, eziModelwayo emva kwabaNtu abaDala abakhulileyo
Izikhuselo zeDyson zibiza kakhulu, asinakulindela nabani na esimaziyo ukuba asinike isipho (nangona singasamkela ngovuyo!). Inguqulelo yabantwana yokudlala, nangona kunjalo, ifikeleleka ngakumbi, kwaye ukuba unayo (okanye uyazi) umntwana othanda ukudlala kwimisebenzi yasekhaya-ukupheka ukudlala ukutya ekhitshini lokudlala, ukuvuthulula uthuli nezilwanyana ezimile okwezilwanyana- oku kunokuba iphupha langoku. Kwaye kujongeka ngathi umgca wokudlala weDyson ukhulile kunyaka ophelileyo.
Umsebenzi-Ukusuka Ekhaya-kwaye-ewe, oko kubandakanya iipesenti ezingama-40 zabasebenzi
Ngaphandle kwenqanaba leyure, kukho indawo yokukhula, ukubakho kwentlawulo yexesha elongezelelekileyo, kunye nesaphulelo sabasebenzi abangama-40 ekhulwini kuthengiso oluninzi kwiimveliso zikaWilliams-Sonoma.
Yonke imihla yeSikhumbuzo yoThengiso lweRug Usenokuthenga namhlanje
Hlaziya umhombiso wakho wasehlotyeni ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-80 ususe iirugs ezivela kubathengisi abakuthandayo kwi-Intanethi, kubandakanya iMacy's, Boutique Rugs, Urban Outfitters, nokunye.
Ubukhulu bukaLilly Pulitzer Emva kokuThengiswa kwePhathi kuvuliwe, kwaye ezona zinto ziBalaseleyo zithengisa ngokukhawuleza
Zonke izinto ezifumanekayo ezivela kwintengiso enkulu kaLilly Pulitzer emva kwePati, kubandakanya ukuhonjiswa kwekhaya kunye nokuhamba.
Umnyhadala weFenitshala enkulu yeNtengiso yeHlabathi uneToni yamaXesha amaXesha aphakathi kwaXesha aphantsi kwe- $ 300
Gcina ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-60 kwiitafile zomthi zaphakathi kwenkulungwane, izisombululo zokugcina, kunye nezihlalo ezihombisayo kule Ntengiso yeHlabathi yeNtengiso.
Unako ekugqibeleni ukufumana uYilo ngaphakathi Fikelela Ifanitshala ngaphantsi-kodwa kuphela ixesha elilinganiselweyo
Uyilo lwe icon lweSnag ngaphakathi kwefenitshala yefowuni yendlela engaphantsi kwi-eBay, kodwa kuphela ixesha elimiselweyo.
Ezona Ndidi zoMsebenzi eziNgcono zokufumana amanqaku kule Veki yeholide (Ewe, kubandakanya iDyson)
Okwesine kwimpelaveki kaJulayi lelinye lawona maxesha abalaseleyo enyakeni yokuphucula indawo yakho - kwaye siqokelele ezona zivumelwano zibalaseleyo zokuthenga ngoku.
Yonke into ofuna ukuyifumana ukuze uqale ukunitha, ukukhonkxa, ukuloba kunye nokunye
Ngoku uninzi lwethu lukhuselekile endaweni ekhaya, luzama ukufumana indlela yokugcina ixhala lethu lingasithathi, zimbalwa izihlobo zam eziye zalinga ukubuza apho zinokujonga khona kwi-Intanethi ukuqala ukufunda ukwenza ubugcisa. Ndiluka ebuntwaneni, ndanitha ngokungakhathali kangangeminyaka esibhozo, ndaza ndaluka neminyaka emibini. Xa amashishini angabalulekanga engavalwanga, ndisebenza ndize ndifundise umsebenzi wesingxungxo kwivenkile yentsimbi yalapha.
Iidola ezingama-25 zeBhafu zokusetha abaHlaziyi beAmazon azinakuyeka ukuTsala malunga
I-Utopia Towels ephezulu ethambileyo isethwe eAmazon ifumene uphononongo lokurhuqa, umndilili weenkwenkwezi ezi-4.3 kwezi-5, kunye nokuphononongwa okungaphezulu kwama-2,800 kweenkwenkwezi ezintlanu.
IWalmart ivuza nje intengiso yabo emnyama yangoLwesihlanu-Nantsi into onokuyithenga ngoku
Musa ukulinda kude kube nguLwesihlanu omnyama ukufumana ezona zisombululo zibalaseleyo, iWalmart isandula ukukhupha izivumelwano zabo kwangoko kwezona zinto zibalaseleyo.
IStaub isandula ukuQokelelwa kweStockable Cookware Collection Efanelekileyo kwiiKhitshi ezincinci
Ifumaneka kuphela eWilliams-Sonoma, iStubub's 3-piece kunye ne-4-piece cookware sets ziya kukugcinela indawo enkulu yekhabinethi.
Isilumkiso: Zonke izinto zokulala zabahambi ezidolophini ziipesenti ezingama-20 namhlanje kuphela
I-Urban Outfitters ibonelela ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 zokulala namhlanje kuphela.
Iingqekembe zengelosi ezikhuselayo zivela ngokungacwangciswanga
Ingelosi inombolo 999 intsingiselo
lithetha ntoni 10 10
yintoni ingelosi engama-333
Kutheni ndiqhubeka ndibona ama-222
kuthetha ntoni ukubona u-222